JW Usoro Ihe Omume Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Mee 2-8, 2016
GỤỌ NKE Abbey Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Guerze Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Abụ nke 63 na Ekpere
“Jehova Na-anabata Ekpere Anyị Kpere Maka Ndị Ọzọ”: (Nkeji 10)
Job 42:7, 8—Jehova chọrọ ka Job kpee ekpere maka Elifaz, Bildad, na Zofa (w13 6/15 21 ¶17; w98 5/1 30 ¶3-6)
Job 42:10—Jehova mere ka Job gbakee mgbe o kpechara ekpere maka ha (w98 5/1 31 ¶2)
Job 42:10-17—Jehova gọziri Job maka okwukwe ya na otú o si tachie obi (w94 11/15 20 ¶19-20)
Job 38:4-7—Olee ndị bụ “kpakpando ụtụtụ,” oleekwa ihe anyị ma gbasara ha? (bhs 97 ¶3; w06 1/15 3 ¶ 2)
Job 42:3-5—Gịnị ka anyị ga-eme ka anyị nwee ike ịhụ Chineke otú ahụ Job hụrụ ya? (w15 10/15 8 ¶16-17)
Ọgụgụ Baịbụl: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Job 41:1-26
Kwadebe Otú Anyị Ga-esi Zie Ozi Ọma n’Ọnwa A: (Nkeji 15) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. Kpọnye vidio ndị na-egosi otú anyị nwere ike isi zie ndị mmadụ ozi ọma. E kirichaa nke ọ bụla, a tụlee ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ dị na ya. Ná nkenke, kọwaa otú e nwere ike isi jiri ekwentị mee ihe ụfọdụ e kwuru n’isiokwu bụ́ “Otú E Si Eji JW Library Eme Ihe.” Chetara ndị nkwusa na ha kwesịrị idenye ugboro ole ha gosiri ndị mmadụ vidio n’akụkọ ozi ha. Gbaakwa ha ume ka ha dee otú ọzọ ha nwere ike isi zie ndị mmadụ ozi ọma.
Abụ nke 60
“Ị̀ Na-eji JW Library Eme Ihe?”: (Nkeji 15) Burunụ ụzọ jiri nkeji ise tụlee ihe ndị dị́ n’isiokwu ahụ. Kpọnyezie vidio bụ́ Bido Iji “JW Library” Eme Ihe. E kirichaa ya, unu atụlee ihe ndị e gosiri na ya. Kpọnyekwa vidio ndị nke ọzọ bụ́ Otú Ị Ga-esi Adanlodu Ihe nakwa Otú Ị Ga-esi Eme Ka Ihe Ị Na-agụ Dị́ Otú Ị Chọrọ, unu atụleekwa nke ọ bụla otú ahụ e si tụlee vidio nke mbụ. Gbaa ụmụnna ume ka ha gbalịa tinye JW Library n’ekwentị ha ma danloduo akwụkwọ dị iche iche na ya ma ọ bụrụ na ha ga-emeli ya, tupu izu Mee 16 eruo, bụ́ izu a ga-atụle isiokwu bụ́ “Otú E Si Eji JW Library Eme Ihe.”
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: (Nkeji 30) ia isi nke 14 ¶14-22 na igbe dị na peeji nke 124
Abụ nke 77 na Ekpere
Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ na Mee 2-8, 2016